Newbridge - banye na Kildare
Newbridge dị na nsọtụ Curragh Plains ma Bog nke Allen na Pollardstown Fen gbara ya. Amaara mpaghara a nke ọma maka ịzụ ịnyịnya Irish, ọzụzụ na ịgba ọsọ, yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị gbara ya gburugburu bụ ugbo ugbo ụlọ yana Curragh Racecourse. Obodo gbasaa ngwa ngwa mgbe e wuru ogige Curragh na 19th narị afọ. Obodo a, n'akụkụ mmiri nke River Liffey, nwere ike bụrụ onye amara nke ọma maka ịbụ ụlọ nke Newbridge Silverware bụ ndị na-emepụta ebe a kemgbe 1934 na nso nso a ka enwere nnukwu ụlọ ahịa mpaghara na Ireland - Whitewater. Obodo dị jụụ nke Athgarvan, Kilcullen na Allen dị nso yana ebe egwuregwu golf kacha ochie, Royal Curragh. Ma ọ bụrụ na i gee ntị nke ọma, Curragh Plains na ugwu Allen dị nso na-akọ akụkọ ifo nke St Brigid, na Fianna na Dan Donnelly.
Ebe kacha mma na Newbridge
Ihe iri ị nwere ike ịmaghị gbasara Curragh
Nzọụkwụ azụ na oge ngosi ihe ngosi nka
Chọpụta ihe ndị ọzọ na Newbridge
Ihe nketa na akụkọ ihe mere emeCommunity
Ịzụ ahịaKwado Mpaghara
Ịzụ ahịaBọchị mmiri ozuzo
Pubs & Ndụ abalịNri oriri n’èzí
Ihe nketa na akụkọ ihe mere emeIhe Nwere Ike ImeCafes